Umgodi kanye nebhuloho eliwile lidale umonakalo eMbombela | Scrolla Izindaba
Umgodi kanye nebhuloho eliwile lidale umonakalo eMbombela
Isiphepho u-Eloise sidale umonakalo ezindaweni eziningi ezweni – kanti iMbombela ese-Mpumalanga ayisindanga kulesisjeziso.
Abahlali base-Tekwane South nase-eNtokozweni bathi banxusa iDolobha laseMbombela ukuthi lilungise umgodi omkhulu ku-D2296 ngoba basaba ukuthi leli bhuloho lizodilika.
Njengamanje ukuwa kwaleli bhuloho kudale ukuphazamiseka okukhulu futhi abadayisi base-Mozambique bacishe bahlukaniswa namakhasimende abo aseNingizimu Afrika.
UMnyango Wezokuphepha Komphakathi esifundazweni weluleke abashayeli bezimoto ukuthi bagweme ukusebenzisa lo umzila.
UErmani Ricardo wase-Inhambane, e-Mozambique utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi ubambekile la eNingizimu Afrika ngoba akanayo imali yokuphindela ezweni lakhe.
“Ngiletha ama-oda kumakhasimende ami eNingizimu Afrika njalo ngesonto kodwa ngingahle ngilahlekelwe ngamakhasimende amaningi uma nginyusa amanani uma kufanele ngithathe imizila emide,” kusho Ermani.
“Lokhu kuzonciphisa inzuzo yami futhi nebhizinisi lami lizoma.”
Abahlali abaseduze kwamadamu yibo abathinteke kakhulu, njengoba imvula enamandla iholele ekuchichimeni kwamadamu.
Abantu abayisishiyagalombili kusatshwa ukuthi bashonile kanti abahlanu kubikwa ukuthi badukile.
UMnyango wezokuPhepha nokuXhumana unxuse abashayeli ukuba baqaphele njengoba imigwaqo namabhuloho amaningi alimale kabi kanti nezimoto ziminyene kakhulu ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo emikhulu.